ဘုရားရှိခိုးပြီးတိုင်း ကြေးစည်တီး၍ အမျှဝေပါ – Justnow news
ဘုရားရှိခိုးပြီးတိုင်း ကြေးစည်တီး၍ အမျှဝေပါ
November 14, 2020 author Comments0Comment
ကြေးစည်ဘာကြောင့်တီးသင့်တာလဲ..? ဘုရားရှိခိုးပြီးတိုင်း ကြေးစည်တီး ပြီး အမျှဝေပါ။ ကြေးစည်သည် သူတော်ကောင်းတို့၏နားတွင် အေးမြသောအသံရှိ၏။ သူယုတ်မာ(နာနာဘာဝ)တို့၏နားတွင်ပူလောင်၏။ ကောင်းသော သူတို့သည် သာဓုခေါ်ပြီး မကောင်သောသူတို့သည်အဝေးသို့ပြေး၏ ကြေးစည်သည် အအေးဓာတ်ကိုပေးသဖြင့် ကိလေသာအပူကို ငြိမ်းစေပါသည်။ မိမိမှာ ကံဆိုးနေပြီ ကံ ညံ့ နေပြီ ထင်လျှင် ပို၍ တီးသင့်သည်
ကိုယ့်ကို မကောင်းကြံမဲ့ သူတွေကို ဝေးကွာ သွားစေပါတယ်။ အမျှဝေရာတွင်လဲ လူ၏အသံအားဖြင့် အမျှဝေသည့်အခါ အဝေးသို့မရောက်နိုင်ပါ။ကြေးစည်သည် အဝေးသို့ ပဲ့တင်သံဖြင့် သွား နိုင် သည် အဝေးတွင်ရှိသော နတ် လူတို့ကြားနိုင်ပါသည် သာဓုခေါ်နိုင်သည်။ ကြေးစည်တီးပြီး မေတ္တာပို့အမျှဝေလျှင်ပို၍ ထိရောက်ပါသည်။ ဘုရားရှိခိုးပြီးတိုင်း ကြေးစည်တီး၍အမျှဝေပါ။
ကွေးစညျဘာကွောင့ျတီးသင့ျတာလဲ..? ဘုရားရှိခိုးပွီးတိုငျး ကွေးစညျတီး ပွီး အမြှဝပေါ။ ကွေးစညျသညျ သူတောျကောငျးတို့၏နားတှငျ အေးမွသောအသံရှိ၏။ သူယုတျမာ(နာနာဘာဝ)တို့၏နားတှငျပူလောငျ၏။ ကောငျးသော သူတို့သညျ သာဓုခေါျပွီး မကောငျသောသူတို့သညျအဝေးသို့ပွေး၏ ကွေးစညျသညျ အအေးဓာတျကိုပေးသဖွင့ျ ကိလသောအပူကို ငွိမျးစပေါသညျ။ မိမိမှာ ကံဆိုးနပွေီ ကံ ညံ့ နပွေီ ထငျလြှငျ ပို၍ တီးသင့ျသညျ
ကိုယ့ျကို မကောငျးကွံမဲ့ သူတှကေို ဝေးကှာ သှားစပေါတယျ။ အမြှဝရောတှငျလဲ လူ၏အသံအားဖွင့ျ အမြှဝသေည့ျအခါ အဝေးသို့မရောကျနိုငျပါ။ ကွေးစညျသညျ အဝေးသို့ ပဲ့တငျသံဖွင့ျ သှား နိုငျ သညျ အဝေးတှငျရှိသော နတျ လူတို့ကွားနိုငျပါသညျ သာဓုခေါျနိုငျသညျ။ ကွေးစညျတီးပွီး မတေ်တာပို့အမြှဝလြှေငျပို၍ ထိရောကျပါသညျ။ ဘုရားရှိခိုးပွီးတိုငျး ကွေးစညျတီး၍အမြှဝပေါ။
ဆီးခ်ိဴျဖစ္ပြားမႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ ပဲေစာင္းလ်ားသီးရဲ႕ က်န္းမာေရး အက်ိဴးေက်းဇူးမ်ား
ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမပူမပင် မကြောင့်မကြ အေးချမ်းစွာနေထိုင်ဖြတ်သန်းနိုင်စေမယ့် ဗုဒ္ဓယတြာ
လက်သည်းခွံ အရောင်ကနေ သိနိုင်တဲ့ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေး
ဒူးနာတဲ့သူတွေကို ကိုယ်ခြင်းစာလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ(လက်တွေ့ ဒူးနာပျောက်ဆေးနည်းတစ်ခုပါ)
သင့်ရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောပြပေးနေတဲ့ လက်ကောက်ဝတ် လမ်းကြောင်းများ ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ပါ…
မော်တင်စွန်းစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ အံ့သြထူးဆန်းဖွယ် ( ၁၈ ) ပါး
ႀကိဳ႕ထိုးျခင္းကို အျမန္ဆုံး သက္သာေစမည့္ နည္းလမ္းေကာင္း (၁၀) ခု